सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्यो अब कसको कति ? हेर्नुहोस सूचीसहित — Sanchar Kendra
सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्यो अब कसको कति ? हेर्नुहोस सूचीसहित
काठमाडौं –सरकारले कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गरेको छ । संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १८ देखि २० प्रतिशत तलब वृद्धिको घोषणा गरेका हुन् ।
राजपत्र अनंकिततर्फ २० प्रतिशत र राजपत्रांकिततर्फ १८ प्रतिशत हुने गरी वृद्धि गरिएको तलब आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।
यससँगै खरिदारदेखि नायव सुब्बासम्मका कर्मचारीको तलब २० प्रतिशत र शाखा अधिकृतदेखि मुख्यसचिवसम्मका कर्मचारीको तलब १८ प्रतिशत बढेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारी कोषबाट तलब खाने निजामति, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी गरी सबै कर्मचारीको तलब बढाइएको बताए
अंकमा हिसाब गर्दा सबैभन्दा कम खरदारको ४ हजार ४३४ तथा मुख्य सचिवको तलब ९ हजार ९३६ रुपैयाँ बढेको छ । बढेको तलब जोड्दा खरिदारको तलब २६ हजार ६०४ तथा मुख्य सचिवको तलब ६५ हजार १३६ पुग्छ ।
यस्तै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा बजेट प्रस्तु गरिरहेका छन् । यसैक्रममा उनले अव सार्वजनिक गाडीमा चुरोट पिए जरिवाना हुने र, ८३ हजार युवालाई सरकारले सित्तैमा सिपमूलक तालिम दिने बताएका छन् ।
यस्तै सरकारले स्कुल पढ्ने बालबालिकालाई खाजा खर्चका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको उनले जानकारी दिएका छन् । बजेट भाषण अर्थ सरोकार डटकममा लाइभ प्रशारण भइरहेको छ ।
त्यस्तै सरकारले चुरोट, मदिरा र अन्य सूर्तीजन्य पदार्थमा सरकारले सामान्य कर बढाएको छ । बुधबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यस्ता पदार्थमा सामान्य कर बढाएको जनाएका हुन् । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
जसमा चालूतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख, पूँजिगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रहेको छ । १५ खर्बको ३२ अर्बको बजेटका लागि राजस्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख, वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९८ अर्ब ३३ करोड जुटाइने छ भने आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ९५ अर्ब व्यवस्थापन गरिने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।